Dagaalyahanadda Al-shabaab oo dagaal xoog leh kula wareegay deegaanka Goofgaduud – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dagaalyahanadda Al-shabaab oo dagaal xoog leh kula wareegay deegaanka Goofgaduud
Wararka ka imaanaya gobolka Bay ayaa waxay sheegayaan in dagaalyahanadda Al-shabaab ay maanta gebi ahaan la wareegeen deegaanka Goofgaduud oo 30 KM u jirta magaalada Baydhabo.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed oo muddooyinkii ugu dambeysay ku sugnaa deegaanka Goofgaduud ayaa la sheegayaa inay dagaal culus maanta kala kulmeen dagaalyahanadda Al-shabaab oo weerar culus halkaasi kusoo qaaday.
Labada dhinac ayaa la sheegayaa inay dagaalkaasi isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan in dagaalyahadda Al-shabaab ay halkaasi la wareegeen.
Dagaalkaasi ayaa la sheegayaa inuu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac iyo dad shacab ah, waxaana dhaawacyadda ciidanka iyo dadka shacabka ahba lasoo gaarsiiyay isbitaalka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Dhinaca kale, ciidamada huwanta ah ee isaga baxay deegaankaasi Goofgaduud ayaa la sheegayaa inay u jiheeysteen dhinaca bari ee deegaankaasi kaga beegan magaalada Baydhabo.
Dad ku sugan deegaanka Goofgaduud oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa waxay sheegeen in Al-shabaab ay haatan howlgallo ka wadaan deegaankaasi, waxaana laga baqayaa in dagaal rogaal celis ah halkaasi kusoo qaadaan ciidamada huwanta ah.